PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-25 - UNGAVUMELI IGAMA LAKHO LINGCOLISWE ISIKWELETU SEMOTO
UNGAVUMELI IGAMA LAKHO LINGCOLISWE ISIKWELETU SEMOTO
Ilanga langeSonto - 2018-11-25 - Izindaba -
kwezindleko zokuphila okubangwa phakathi kokunye ukukhuphuka kwentengo ka-petrol, I-VAT nezinye izimo ezisuke zingalindelekile, sekudale iningi labantu lazithola bengasakwazi ukumelana nezindleko zezidingo zabo.
Lezi zimo zigcina seziphoqa abantu ukuba babalekele ukukhokhela izimoto zabo kwezinye izinyanga. Kubalulekile ukukuqonda ukuthi lokhu kuwukwephula isivumelwano osuke unaso nebhange elikuboleke imali yokuthenga imoto okungaholela ekutheni liyidle imto. Ngakho-ke kusemqoka ukuthi uthole izindlela ezingcono zokugwema lokhu ukuba kungakwehleli. Izindaba ezimnandi ezokuthi lokhu ungakugwema ngokuthi ulethe imoto yakho kwa-drive Link, esikwazile ukusiza abaningi abakulesi simo, uma usubona ukuthi umthwalo usuyakusinda. “Ungalindi amathonsi abanzi uma usunenkinga yokukhokhela imoto yakho. Kuyaziwa ukuthi isimo somnotho asisihle kulezi zinsuku, lokhu akuthinti kuphela iningizimu Afrika kodwa yisimo esibhekene nomhlaba wonke. “Ingakho kwa-drive Link sikwenza kube umsebenzi wethu ukusiza labo ababhekene nezinkinga zokukhokhela izimoto zabo. Esikwenzayo ukuyithatha imoto siqhubeke nokuyikhokhela. Ngokwenza lokhu sivikela umnikazi wemoto ekutheni igama lakhe lingangcoli okungamenza ukuthi angabe esakwazi ukuthenga noma yini ngesikweletu,” kusho umnu Mvelase oseneminyaka engaphezulu kuka-35 ekule ndima echushisa izinkulungwane zabathengi bezimoto. Ngakho-ke, ukugwema ukuthi igama lakho lingangcoli musa ukuyekelela imoto yakho ize idliwe.
Seluleka ukuthi imoto usheshe uyilethe kithi kungakonakali kakhulu ukuze sizokwazi ukukusiza kanjalo noqhubeka nokuyikhokhela ukuzwe ungathwali kanzima Okubuhlungu kakhulu ukuthi uma ibhange seliyidlile imoto kungcola igama lakho, bese liyidayisa esidlangalaleni okuthi uma kukhona imali eshodayo libuye lizoyifuna kuwe okusho ukukhokhela imoto ongasahambi ngayo.
Umnu Mvelase osewazi ngaphakathi ngangaphandle lo mkhakha, akagcini ngokusiza labo abehlulekayo ukuthenga izimoto kodwa u hlenga n asebe s engcupheni yokudlelwa zona ngenxa yezimo ezingasalawuleki.
“Uma umuntu esethwele kanzima, esesindwa ukuyikhokhela imoto, sithi akayilethe kithi simsize ukuze ingadliwa. Siyakukhuthaza ukuthi abantu basheshise ukuletha izimoto umonakalo wesikweletu ukungabi mkhulu,” kweluleka umnu Mvelase.
Oletha imoto kumele aphathe ikhophi ye-id yakhe ne-akhawunti yasebhange lapho eyikhokhela khona ukuze kubonakale ukuthi ikweleta kangakanani.